भुवन–साम्राज्ञी वाकयुद्ध‚ साम्राज्ञी भन्छिन्- प्रहरी केस हुनसक्ने तहको दुर्व्यवहार भएको थियो
नेपाल लाइभ सोमबार, असार १५, २०७७, २०:३०
काठमाडौं– फिल्म क्षेत्रमा यतिबेला आरोप–प्रत्यारोपको शृंखला चलेको छ। बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतले आत्महत्या गरेपछि सल्किएको अपमान, नातावाद र कृपावादको आगो नेपाली फिल्म क्षेत्रसम्म आइपुगेको छ।
त्यो आगोको रापमा यतिबेला चर्चित अभिनेता तथा निर्माता भुवन केसी र अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह परेका छन्। अभिनेता केसीको फिल्मबाट डेब्यु गरेकी अभिनेत्री साम्राज्ञीले त्यो समय आफूले झेल्नुपरेका दुर्व्यवहार शुक्रबार इन्स्टाग्राममा भिडियो पोष्ट गर्दै खुलाइन्।
सत्र वर्षको उमेरमा फिल्ममा काम गरिरहँदा आफूले सुटिङ स्पटमा दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको उनले खुलाएकी थिइन्। सुन्नै नसकिने गालीदेखि विभेदसम्म हुने गरेको उल्लेखसमेत गरेकी थिइन्। आफ्नो परिवारको कोही सदस्य फिल्म क्षेत्रबाट नहुँदा आफूलाई केही असहज भएको उनको बुझाइ थियो। पारिश्रमिकका मामलामा पनि बाहिर सुनिने गरेको सबै झुटो भएको उनले बताएकी थिइन्।
यसको जवाफमा भुवन केसीले ‘जुन थालमा खाने त्यही थालमा दुलो पार्ने’ भन्दै प्रतिक्रिया जनाएका थिए। केसीले कटाक्ष गर्दै आफ्नो फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘सामाजिक सञ्जालमा गर्ने बराबर अभिनय फिल्ममा पनि गरे हुने नि!’
आफूले भोगेको कुरा सुनाइरहँदा धेरैले फिल्ममा काम नपाउने‚ त्यो पनि केटी मान्छेमा बढी असर हुने बताएको उल्लेख गर्दै उनले थप खुलस्त पारेकी छन्। त्यसरी सम्झाउनेलाई उनको प्रश्न छ, ‘मनैदेखि चित्त बुझेन‚ त्यसैले चुप लागिनँ। त्यो अवस्था मैले भोगेको छु। मैले देखेको छु। मेरो ठाउँमा तपाईं हुनुहुन्थ्यो भने त्यतिबेलै केही गर्नुहुन्थ्यो। सम्झाउने बुझाउने कोही थिएन।’
अभिनेता केसीले फिल्ममा काम दिएको प्रशंसा गर्दै भोगेका व्यवहार उनले सार्वजनिक गरेकी छन्। तर, त्योबेला आफूमाथि भएको दुर्व्यवहारका विषयमा उजुरी गर्दा प्रहरीले कारबाही गर्नेसम्मको अवस्था आइपर्नेतर्फ इङ्गित गर्दै उनले दुर्व्यवहारको हद संकेत गरेकी छन्। भनेकी छन्, ‘मैले कहिल्यै पनि केही कुरा कसैलाई भनिनँ। मैले पुलिस केस गरेको भए त्योबेला केस लाग्थ्यो।’
आफूले दुर्व्यवहारबारे बोल्दा धेरैले त्यसो नगर्न सुझाइरहेको उनी बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘उहाँले राम्रो व्यवहार गर्नुभएको थियो भने यो समय आउँदैनथ्यो। यो अवस्था आएको उहाँले गर्दा हो। कति जनाले यस्ता विषयमा बोल्नुभएको होला। सुनुवाई भएन होला।’
आफूमाथि घटेको घटनाका विषयमा पछि एक कार्यक्रममा अभिनेता केसीले सम्झाएको बताउँछिन्। उनको भनाइ उद्धृत गर्दै साम्राज्ञीले भनेकी छिन्, ‘उहाँले मलाई बाबा! हेर्‚ तँ त मेरो प्रोडक्ट हो। पुरानो कुरा कोट्याएर के फाइदा भन्नुभएको थियो? भविष्यमा नबोलेस् भनेर उहाँले सम्झाउनुभएको होला।’
बाहिर उनको कुरा सुनेर हाँसिरहेपनि भित्रभित्र घिन लागिरहेको उनले उल्लेख गरेकी छिन्। भन्छिन्, ‘मसँगै टाँस्सिएर बोलिरहेको के। फेरि त्यही व्यवहार। मेरो कान नजिकै मुख ल्याएर बोलिराछ। आइ लभ यु बाबा भनिराछ।’
आफूले ‘हस् अंकल’ भन्दा उनले अंकल भनेको मन पर्दैन भनेको पनि बताएकी छिन्। त्यसपछि आफूले ‘हस् दाइ’ भन्दा टेक केयर भनेको सम्झिएकी छिन्।